यस्तो हुलीया बनाएर रुसको गल्लीमा के गर्दैछन् सलमान ? हेर्नुहोस् – Jagaran Nepal
यस्तो हुलीया बनाएर रुसको गल्लीमा के गर्दैछन् सलमान ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । बलिउडका अभिनेता सलमान खान नयाँ फिल्मका लागि रुस पुगेका छन् । उनी रुस जाँदै गर्दा विमानस्थलमा भएको एक घटना चर्चामा आएको थियो । उनलाई विमानस्थलको गेटमा सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । तर अहिले रुस पुगीसकेका सलमानले काम सुरु गरिसकेका छन् । उनी फिल्मको काममा लागेका हुन् ।
सलमानले आफ्नो अपकमिङ फिल्म ‘टाइगर–३’को छायाँकन सुरु गरेका छन् । अहिले ‘टाइगर–३’को कामका लागि सलमान खान रुस पुगेका हुन् । रुस पुगेका सलमान खानको ‘टाइगर–३’को सेटबाट विभिन्न तस्वीरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्, जुन सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ । तस्वीरमा सलमान खानले आफूलाई पूरै परिवर्तन गरेका छन् ।
उक्त तस्वीरहरुलाई सलमान खानको एक फ्यान क्लबले सार्वजनिक गरेको हो, जहाँ सलमान खान रुसको गल्लीहरुमा छायाँकन गर्दै गरेका दृश्यहरु छन् । दुईदिन अगाडि मात्रै सलमान खान र अभिनेत्री क्याट्रिना कैफ आफ्नो अपकमिङ फिल्म ‘टाइगर–३’को छायाँकनका लागि रुस गएका हुन् ।